My World: အနန္တငါးဖြာ မှတ်စရာ
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, December 05, 2012 Labels: ဖြိုးဖြိုးဖတ်ဖို့
တို့ဗမာ.. အနန္တော အနန္တ .. ငါးပါးကို .. ကိုယ်ရေတင်.. ရိုသေလျှင် ဆင်းရဲခြင်း.. ကင်းကွာ ..
ဘုရားနဲ့ တရားတော် ရဟန်းသံဃာ .. မိဘနှစ်ပါးနဲ့ သင်ကြားတဲ့ ဆရာ..
ယုံကြည်စွာ ..ပြုစုကြပါ.. ပုပုရွရွ..သတိပေးချင်တာ..။
နေ့တိုင်းသာ ညတိုင်းသာ .. လက်ဆယ်ဖြာ ..ဦးထိပ်တင်မိုးကာ ရှိခိုးလို့ ၀န္ဒနာ . ပူဇော်ကြဖို့ အမျိုးသား… တို့ ဗမာ….။..
ဂါရ၀တရား..ထာဝရထား .. မမှားကြဖို့ရာ.. စွဲမြဲကြ မလွဲအောင်သာ.. မျိုးရိုးဇာတိပါ..
မသွေတမ်းမှတ်ကြပါ..ရွှေကျမ်း မြတ်ဘုရာ့အလာ အနန္တငါးဖြာမှာ..
လင်းထင်စွာ ရှိရင်း ဒေသနာ…
ရဟန်းတော် တွေ့ရင် … ၀တ်ချပါ .. ဖိနပ်ကို ချွတ်ကာ လူရှေ့မှာ .. စိတ်မမှားနဲ့ အရိပ်များလဲ ခြေနင်းမိ ရှောင်ကွင်းပါ..။
ကိုယ်ကျင့် တရားဖြင့် လူတိုင်းရှိတာ အမှန်ပါ ..
ဗိုလ်စိတ်ပေါက်ကာနဂိုစိတ်ပျောက်လာ စဉ်းစားကြဖို့ ..အမျိုးသားတို့ဗမာ..
အဖေ အမေ ဆုံးမရင် ပယ်တာ..
တို့ရော..သူသူငါငါ ..မှားယွင်းချက်တွေ ..ပြင်ကြစေရာ.
ဒီသီချင်းကို ခေတ်ဟောင်းအဆိုတော် မေစိန်က သီဆိုထားပါတယ်။သီချင်းရေးဆရာကိုတော့ မသိရပါဘူး။ သီချင်းစာသားထဲမှာ ပါသလိုဘဲ ကျွန်မတို့ ဗမာ လူမျိုးတွေဟာ မျိုးရိုးကောင်းတဲ့ သာကီဝင် တွေက ဆင်းသက်လာတာပါ။
ဘုရား တရား သံဃာ၊ ဆရာမိဘ ဆိုတာ အနန္တော အနန္တ ငါးပါးမှာ ပါဝင်တာမို့ မျိးရိုးဇာတိမြင့်မြတ်သူများဟာ ရိုသေစွာ ပြုစုလုပ်ကြွေးကြပါ နေ့နေ့ညည လက်ဆယ်ဖြာ ဦးထိပ်တင်မိုးလို့ ကံတော့ကြပါ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းက လွတ်ကင်းချမ်းသာနိုင်ပါတယ် ဆိုတာ ဘုရားဟောရှိပါတယ်။လို့ သီချင်းမှာ ဆိုထားပါတယ်။
ပြီးတော့ အရေးဆုံးကြီးအချက်က လမ်းမှာဖြစ်စေ တနေရာရာမှာ ဖြစ်စေ သံဃာ တပါးပါးနဲ့ တွေခဲ့သည်ရှိသော် သံဃာရဲ့ အရိပ်ကိုတောင် မနင်းမိစေရန် ရှောင်ကွင်းသွားလာကြရပါမယ်။ ဒါဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကောင်းတယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားအစစ်အမှန်ပါ။ ဗိုလ်စိတ်ပေါက် နဂိုစိတ်ပျောက်လို့ တလွှားလွှား မထီတထီ မရှောင်ကွင်းပါနှင့် လို့ သီချင်းရေးဆရာက ဆိုချင်တာပါ။
VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် သူယုံကြည်ရာကဏ္ဍတခုမှာ ဆရာ ဦးဝင်းထွဋ်ဇော် ကလည်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူယုံကြည်တာတွေ တခန်းတနားပြောသွားပါပြီ။ လူငယ်လေးများ မှတ်သားစရာတွေပါဘဲ။ တိုင်းပြည် ပြုစု ပျိုးထောင်ရာမှာ အတုခိုးမမှားဖို့ အနောက်နိုင်ငံတွေဆီက ၀တ်စားဆင်ယင်မှုမှာ အလွန်အကျွံ ပုံတူကူးမချဘဲ မိမိယဉ်ကျေးမှုကို တဘက်က ထိမ်းသိမ်းရင်း အတုယူသင့်သည်ကိုသာ ယူဖို့ ပြောဆိုသွားတာ တော်တော်ကောင်းတယ်။
ဒီလောက်လဲ ဗိုလ်စိတ် မပေါက်ကြပါနဲ့ လို့ ဆိုချင်တာပါ။
ကျွန်မတို့ဟာ တခါတရံ သံဃာကို ပြစ်မှားမိကြပါတယ်။ သင်္ကန်းကြီးတလွှားလွှား နဲ့ ဟိုချောင်တိုး ဒီချောင်တိုး ဆိုင်ကယ်စီး ဘာစီး ညာစီး အနေအထိုင် မဆင်ချင်ဘူး။ မာတုဂါမတွေနဲ့ ရောရောနှောနှော နေတယ်ရယ်လို့ ကရုဏာ စကားနဲ့ ပြစ်တင်မိကြတယ်။
ဒါက သူ့အပိုင်းလေ။ သူ့အပြစ်နဲ့ သူ ဘဲ။ ကျွန်မတို့ က သင်္ကန်းကို ရိုသေကြရမယ်။
ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းဟာ မြှားဒဏ်ရာကြောင့်စိတ်ဆိုးခြင်းပြင်းစွာ နဲ့ သတ်မယ် ဖြတ်မယ် ပြေးလာပေမဲ့ လိမ္မာပါးနပ်တဲ့ သောနုတ္ထိုမုဆိုးဟာ သင်္ကန်းကို အကာအကွယ်ယူ ရုံထားတာမို့ သင်္ကန်းအရှိန်အ၀ါကြောင့် ကိုယ်ရှိန်သပ်ပြီး လက်တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူး။ သာသနာအပက အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်ဘ၀မှာ ရှိသေးတဲ့ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းကတောင် ဒီလောက် အသိတရားရှိနေသေးရင် သာသနာတွင်းက ကျွန်မတို့ လူသားစင်စစ်ကြီးတွေဟာ သံဃာ ဆိုတဲ့ အရှိန်အ၀ါနဲ့ သင်္ကန်း ဆိုတဲ့ အရှိန်အ၀ါနဲ့ သံဃာ တွေကို ဘယ်လို အကြောင်းပြချက် မျိုးနှင့်မှ အန္တရယ်ပေးဖို့ မသင့်ပါဘူး။ ပေးရင်လည်း ပေးသူကသာ အပြစ်ကြီးပါတယ်။ အင်မတန် ကြေကွဲစရာသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တန်ဆောင်တိုင်ညဟာ မမျှော်လင့်ဘဲ အကျည်းတန်တဲ့ည ကြေကွဲညဖြစ်သွားရတာကိုလည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး။
ကျွန်မက ဖြိုးဖြိုးကို တန်ဆောင်တိုင် ညရဲ့ အလှအကြောင်း အမျိုးမျိုး စာဖွဲ့ ပြောပြခဲ့တာ ခုဆိုရင် အကြောင်းအရာ တခုတိုးသွားပြန်တာပေါ့။ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ အမှားကိုသိရင် သိတဲ့နေ့ဟာ အမှန်ကို ရောက်တဲ့နေ့ပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ အပြစ်တွေကို ယနေ့ပင် ဆေးကြောသုတ်သင် ပြုပြင် လိုက်ကြရအောင်လား။ ။
၁၂.၁၂.၂၀၁၂ မှာ တစ်နှစ်စာ နောက်ပြန် လှည့်ကြည့်တဲ့အ...
လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ အလင်းပေးသူ
အေးရိပ်ကို ဘယ်လိုရှာပါ့မယ် (အပိုင်း ၃)
MTV EXIT ! Jason Mraz Live show !
ကျွန်မတို့ ရဲ့ဟန်ပန်မူရာတွေ
အေးရိပ်ကို ဘယ်လိုရှာပါ့မယ် (အပိုင်း ၄)
လိုအပ်တဲ့အခါ နွေးထွေး သွက်လက် တောက်ပစွာ
လူတိုင်းကို နှုတ်ဆက်ပြီးပြီလား ဟယ်လို !